Shiinaha 1mm PVC soo saareyaasha xaashida xumbada bilaashka ah iyo alaab-qeybiyeyaasha | Gokai
1mm PVC Guddiga Xumbo Bilaash ah
1mm PVC xaashida xumbada bilaashka ah waxay ku jirtaa qaab dhismeedka gacanta iyo nadiifinta dusha sare ee dusha sare waxay ka dhigeysaa xulasho ku habboon daabacadaha takhasuska leh iyo kuwa sameeya boorarka iyo sidoo kale qalab ku habboon qurxinta dhismaha. Xaashida guddiga xumbada PVC ayaa si ballaaran loogu isticmaalay calaamadaha, boorarka, muujinta iyo wixii la mid ah Xaashida PVC xumbo marwalba waxay hubisaa wax lagu kalsoonaan karo, waxqabad la isku halleyn karo iyo saameyn aad u wanaagsan.
Faa'iidada guddiga xumbo la'aanta PVC
1. adag oo waara
Xakamaynta xoqida xoqida ee guddiga xumbada xorta ah ee PVC, xoog farsamo wanaagsan iyo adkeysi ayaa ah faa'iidooyinka injineernimada ugu weyn ee loogu talagalay isticmaalka dhismaha iyo codsiyada dhismaha.
Waraaqaha xumbo ee loo yaqaan 'PVC foam' waa kuwo miisaankoodu aad u hooseeyo marka loo barbardhigo plywood-ka isla markaana si dhakhso leh ayaa loo soo ururin karaa loona diri karaa, taas oo ka dhigaysa bedelka ugu habboon ee looxyada dhaqameed.
3.Fudud in la farsameeyo
Si sahal ah ayaad u goyn kartaa, qaabeyn kartaa, kuna dhejin kartaa looxyada xumbada PVC si waafaqsan baahidaada.
Guddiga xumbo ee PVC waa shey aamin ah oo bey'ada u habboon oo la isticmaalay in ka badan nus qarni. Kuma jiraan qaddar badan oo ah formaldehyde sida qalabka kale ee qurxinta gudaha.
Xaashida xumbada PVC way guban doontaa marka dabku gaadho. Si kastaba ha noqotee, haddii isha dabku ka baxo, way joojin doonaan gubashada. Maaddaama ay ka kooban tahay koloriin badan, alaabada PVC ee la ballaariyey waxay leeyihiin astaamo badbaado dabka.
Uumiga-caabbinta PVC waa hanti muhiim ah, dadkuna waxay u adeegsadaan looxyo xumbo PVC dalabyo badan oo badda ah.
Guddiga xumbo ee PVC wuxuu la yimaadaa hantida ka-hortagga-wax-u-qabashada iyo xasilloonida kiimikada taas oo badbaadin doonta xitaa wakhtiga xiriirka kiimikada.
8. Dhawaqa codka
Xaashida xumbada PVC ee la balaariyay mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa sanqadhaha. In kasta oo dhawaaqa badanaa aan gebi ahaanba la xiri karin, haddana yareynta buuqa waa suurtagal.
Codsiga Guddiga Xumbo ee PVC
1) Gudiga xayeysiinta iyo saxeexa
2) Bandhig & Bandhig
3) Xaashida xayeysiiska ee daabacaadda, xardho iyo goynta
4) Qurxinta darbiga qaybta iyo muuqaalka daaqada
Hore: 20mm PVC alwaaxa guddiga xumbo
Xiga: UV daabac 2mm